Xogtii u dambeysay natiijada doorashada Uganda
Ethiopian troops kill Al-Shabaab militants in Southern Somalia
Somalia's quest to join EAC delayed
Somalia has a potential to develop, says Chinese ambassador
WARIYAHA KAMPALA GAROWE ONLINE
Posted On 16-01-2021, 08:57AM
KAMPALA, Uganda – Guddiga doorashooyinka Uganda ayaa Sabtida maanta ah wuxuu shaaciyey in hogaamiyaha mucaaradka dalkaas, Robert Kyagulanyi loona garan-og-yahay Bobi Wine, uu coddeynta madaxtooyadda ka helay codad dhan 3,119,965 una dhiganta 34.62 boqolkiiba.
Sidda ay muujineyso natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinka, xisbiga NRM oo uu hogaamiyo madaxweynaha talada, Yoweri Kaguta Museveni, ayaa ku hogaaminaya codad badan oo dhan 58.83 boqolkiiba. Waa markii ugu horeysay oo Museveni ka hoos-maro 60 boqolkiiba.
Guddiga doorashooyinka ee xaruntoodu tahay xaafadda Kyambogo ee magaaladda caasimadda ah ee Kampala ayaan wali ka jawaabin sheegasho ka timid Wine oo ah in coddeynta lagu shubtey.
Sikastaba ha noqotee, hadii Museveni sii xijisto hogaaminta coddeynta, wuu guuleysan doonaa isaga oo xukunka hayna 40-sano.
Mr Museveni ayaa, sidda ku cad natiijadii hore ee guddiga doorashooyinka soo bandhigay, wuxuu wadar ahaan haystaa 5,303,831 cod oo kamid ah 9,100,865 qof oo isku-diiwaan-gelisay in ay coddeeyaan.
Codadka la tiriyey illaa 16-ka bishaan Janaayo sanadka 2020 waxaa loogu kala horeeyaa sidda hoos ku xusan;
Amuriat Oboi Patrick
Kabuleta Kiiza Joseph
Kalembe Nancy Linda
Kyagulanyi S Robert aka Bobi Wine
Mugisha Muntu G
Alliance for National Transformation (ANT)
Tumukunde Henry K
Museveni T Kaguta
Codadka saxda ah
Codadka aan sax ahayn
3.6% codadka la dhiibtey
51.63 codadka la tiriyey
Dastuurka Uganda ayaa xeerinaya in waajib ay tahay in natiijadda doorashooyinka madaxtinimada lagu dhawaaqo 48 saac kahor inta aan lasoo xirin goobaha cod-bixinta – taasoo ku beegan Khamiista todobaadkan. Museveni wuxuu hogaaminaya Uganda tan iyo sanadkii 1986-kii.